सोमबारदेखि तीजसम्म टेलिकमको 'लोभलाग्दो अफर', न्यूनतम शुल्कमा लिनुहोस् इन्टरनेटको मज्जा !
ARCHIVE » सोमबारदेखि तीजसम्म टेलिकमको 'लोभलाग्दो अफर', न्यूनतम शुल्कमा लिनुहोस् इन्टरनेटको मज्जा !
काठमाडौं -सधैं उपभोक्ता ठगी गरेको खबरमात्र आउने नेपाल टेलिकमबाट यसपाली पनि सुखद् खबर आएको छ । किनकी नेपाल टेलिकमले बुवाको मुख हेर्ने दिन तथा तीज पर्वको अवसरमा विभिन्न प्रकारका अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । अफर अन्तर्गत जीएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज र डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज रहेका छन् ।
टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार युट्युब डाटा प्याकेज अन्तर्गत एक सय रुपैयाँमा १ जिबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ । यो प्याकेज २१ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसैगरी ६० रुपैयाँमा ५ सय एमबी डाटा १४ दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
युट्युब डाटा प्याकेज लिनका लागि YT1GB वा YT500MB लेखेर १४१५ मा SMS पठाउनु पर्छ । त्यसैगरी डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज लिनका लागि PACK150 वा एब्ऋप्द्दछण् लेखेर PACK250 मा SMS पठाउनु पर्छ । यी सबै अफर आगामी भदौ ५ देखि भदौ १९ सम्म खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।